Home STARS EUROPEAN Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita
Janoary 22, 2017
Ny LB dia manolotra tantara feno momba ny legiona baolina malaza fantatra amin'ny anarana hoe "Ibracadabra". Ny Zlatan Ibrahimovic ny tantaram-pitiavam-bavaky ny tantaram-pitiavam-bahaka momba ny tantaram-pitiavam-bazana dia mitaky ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazana hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny Profile, tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavatra maro tsy fantatra sy tsy fantatra.
Tsy isalasalana, fantany amin'ny maha-mpilalao izay manome fialam-boly be eny an-tampony. Eo amin'ny sehatra, izy dia fantatra ho toy ny milina mpanan-danja amin'ny baolina kitra raha olona miteraka adihevitra.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Ny fahazazana
Zlatan Ibrahimovic (vao haingana)
Zlatan Ibrahimovic dia teraka tamin'ny 3 1981 tamin'ny XNUMX, any Malmö, any Soeda, ho an'ny rainy Bosniaka sy reny Kroaty iray tsy faly manambady.
Naharitra roa taona monja ny fanambadian'izy ireo. Tamin'ny roa taona latsaka kely, Zlatan dia nanatri-maso ny fisaraham-panahin'ny ray aman-dreniny izay vokatry ny ady tsy tapaka, ny tsy firaharahan'ny ankizy, ary ny fanararaotana.
Araka ny lalàna amboam-pandevenana Soedoà, i Jurka Gravić (renin'i Zlatan) dia nanararaotra nitazona ny zananilahy. Izany dia nanamarika ny fiantombohan'ny zavatra voalaza 'Fihetseham-pahaizana mafonja' ho an'ny zazalahy kely. Araka ny voalazan'i Zlatan, 'Ny fiainana miaraka amin'ny reniny sy ny fijerena ny dingana vaovao iray izay tonga eo amin'ny fiainany dia tena traikefa mampalahelo ".
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Karazan-trano iray tapaka
Zlatan Ibrahimovic (vokatra avy amin'ny trano tapaka)
Zlatan Ibrahimovic dia nampiseho ny sendikan'ny alika noho ny fisarahan'ny ray aman-dreniny sy ny fialan-dreniny. Indraindray, nahatsapa ny fahaverezan'ny lanjany sy ny tsy fahampian-tsakafo tsy ara-dalàna izy noho ny fahaverezan'ny voankazo marefo manerana ny vatana.
Fotoana vetivety talohan'ny nahaterahan'i Zlatan tamin'ny fianakaviana reny tokan-tena. Nitranga tanteraka ny famerenana rehefa navela hamerina indray ny fifandraisana amin'ny rainy izay tiany kokoa noho ny mamanany.
Ho an'i Zlatan, nisy tantara mampihetsi-po momba ny rainy. Indray mandeha, rehefa tsy nanam-bola ry zareo, dia nahavita nividy ny fandrianan'i Zlatan avy any Ikea i Sefik Ibrahimovic saingy tsy afaka nanafoana ny fiampangana azy ireo.
Zlatan Ibrahimovic Ray (Sefik Ibrahimovic)
"Nitondra anay tany an-trano izahay. Mahatalanjona ny zavatra nataontsika. Nanam-potoana niaraka tamin'ny reniko aho fa tena niaina niaraka tamin'ny raiko. Indray mandeha dia nomeny ny karamany rehetra mba hahafahako mampiasa azy io mba hisakanana "
Sefik Ibrahimovic na dia taorian'ny fisarahany tamin'ny vadiny aza dia tsy nampoizin'ny fahatsiarovana ny ady Balkana. Tsy afaka nampihorin-dry zareo mora foana ny sarin'ny tanàna misy azy ao Bosnia izay natsangan'ny tafika serba.
Io tsy fisian'ny raim-pianakaviana nahatsiravina izany dia nahatonga an'i Zlatan brahimovic manana fiainana manirery sy ara-nofo.
Araka ny filazan'i Zlatan azy, ny tsy manan-dray ny fironana ara-jeografika mampidi-doza indrindra amin'ny tantaram-pianakaviako.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Fiandrianam-pirahalahiana sy ara-nofo.
Zlatan Ibrahimovic ho tanora
Ho an'i Zlatan Ibrahimovic, sarotra ny nihalehibe. Amin'ny maha-zanaky ny mpitandrina Bosniaka sy mpanadio ny faritra Kroaty, izay nisaraka tamin'izy roa taona, dia niatrika ny fandavana i Ibrahimovic. Ny voka-dratsy nateraky ny ati-trano no nahatonga an'i Zlatan Ibrahimovic hampivelatra ny fihetsika henjana sy ny fanapahan-kevitra hentitra tsy hanova ny fitondran-tena ratsy na dia misy antony tsara aza hanaovana izany.
Araka ny voalazan'i Zlatan, "Tsy nisy olona nanontany ahy hoe: Nanao ahoana ny androko? " . Saingy ilay zazalahy misy lise sy lozaka be dia be ny fahatongavan'ireo foko avy any ivelany ary ireo vondrom-piarahamonin'ireo mpifindra monina marefo, izay tsy mitsaha-mitombo hatrany amin'ny haino aman-jery. Ny fitambarany tamin'ny hatsikana dia namorona fihetsika vaovao izay nahita ny marika voalohany amin'ny tatoos. Fotoana izao no nahatonga azy ho tena tia tena, be taraina ary fiainana.
Nihalehibe izy noho ny 'PettyThief' manana fahaizana manokana amin'ny fangalarana bisikilety sy zava-mamy avy amin'ny fivarotana. Ao amin'ny tafatafa iray dia nilaza i Zlatan hoe: "Raha mila zavatra ho an'ny tenantsika isika, ny zavatra rehetra ataontsika dia ny mandeha any amin'ny toeram-pivarotana ary hangalatra .. hoy izy. Nanana fifandraisana tena tsara tamin'ireo bisikileta aho. "
Zlatan, ankehitriny dia mamaritra ny arabe an'i Rosengard "Paradisa", Vao haingana izy no nanantitrantitra fa mihatsara kokoa ny ao an-tranony any an-tanànany raha oharina amin'ny hotely lafo indrindra eran-tany, ianao tsy manadino fa toerana mampidi-doza ihany koa.
Araka ny voalazan'i Zlatan, 'Football no nanavotra ahy. Amin'ny lafiny iray, dia ny zavatra rehetra toaka sy zava-mahadomelina any Rosengard. Faly aho fa mbola nanalavitra azy ireo. Samy hafa aho satria manana porofo velona amin'izany. Noho izany ny hafatro amin'ny kamboty, izay mahatsapa ho tsy mitovy, na tsy fahatsiarovan-tena, dia ny hoe raha mino ny tenanao ianao dia hanao izany koa. Misy foana ny fahafahana. Ny zavatra rehetra dia miankina aminao. "
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita- Fahaizana amin'ny baolina kitra
Taorian'ny nahazoany baoty baolina kitra, dia nanomboka nilalao baolina i Ibrahimović tamin'ny faha-enim-polo taonany. Izy dia nampianatra ny tenany mba hilalao baolina eo amin'ny tohotra efa tranainy teo ivelan'ny tranon-dreniny. Tao amin'ny trano kely vovoka tao an-tanan-dehibe, Ibrahimovic sy ireo namany dia nanandrana trompetra sy tricks, spins ary tifitra. Ny tsy fisian'ny toerana dia midika fa tsy maintsy haingana tamin'ny lohanao sy ny tongotrao ianao. Nahita ny antsony i Zlatan taorian'ny fampiofanana matihanina.
Araka ny voalazan'i Zlatan, "Raha nilalao baolina tao Rosengard izahay, dia ny fametrahana ny baolina eo amin'ny tongotry ny olona, ​​ny fanaovana zavatra samihafa," hoy izy nanampy. "Taorian'ireo fanoherana rehetra dia tahaka ny 'oohhh' 'eeeyy'. Izy rehetra dia samy nanana ny sarotra indrindra, ny trotraka tsara indrindra, ny hetsika craziest. Tiako izany. "
Rehefa avy niodina izy, dia naverina tanteraka io tobin-dapa io, niaraka tamin'ny alam-barotra nokarakarain'ny Nike.
Nahatsiaro ny hopitaly iray mpiara-miasa izy fony izy 13 taona. Ianao fony izy 15 taona, dia naleony niasa tany amin'ny dockan'i Malmo fa tsy nilalao baolina. Nandresy lahatra ny hevitr'ilay mpanazatra azy izy.
Zlatan Ibrahimovic Mpilalao baolina kitra taloha
Nahita varavarana mihidy ihany koa i Ibrahimovic raha niezaka nanohy ny asany ho mpilalao baolina matihanina. Na dia nanatevin-daharana ny klioba matihanina aza izy, Malmo FF, tamin'ny taona 17, nangataka ny ray aman-drenin'ny iray tamin'ireo mpiray ekipa aminy handroaka azy hiala ny klioba. Izany dia satria Zlatan dia nanosika ny vady aman-janany izay toa ny zanaka lahin'ny ray aman-dreniny.
Araka ny voalazan'i Zlatan, "Nahazo taratasy avy tamin'ny ray aman-dreniny ilay mpilalao ary nangataka ny olona hanasonia izany mba hanosika ahy hivoaka ny klioba rehefa notendreko izy. Raha afaka mametraka ny tenako amin'izany fotoana izany androany aho, dia hilaza ny tenako hoe 'tsy manao izany mihitsy aho', fa tezitra ny tovolahy ".
Tamin'ny taona 18 izay navoakany avy eo baolina kitra dia afaka manolotra azy hoavy ho azy, lalana iray lavitra ny fanabeazana sarotra. Ibrahimovic dia manakorontana ny tatoazy eo amin'ny andaniny roa ary mientanentana lalina rehefa nanontaniana izy hoe, teo aloha, mety ho nino izy fa afaka manatratra ny zavatra ananany.
Ibrahimovic dia nanao ny lahasa matihanina ho an'i Malmö FF ao amin'ny 1999, ary nanampy ny klioban'ny fanatanjahan-tena faharoa ny latsabato ho amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny vanim-potoana manaraka. Ny mpiloka 6'5 dia nanao sonia niaraka tamin'ny klioba holandey malaza AFC Ajax ary nanolotra ny fahaiza-manaony mahatalanjona tao anatin'ireo ekipa roa nahazo ny baolina kitra, na dia nanjary nalaza ho mpilalao ara-panahy aza izy.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Adult Controversies
Izy no mpilalao baolina manana ny fihetsika ratsy sy ny fiavonavonana manambony tena. Izy no miady amin'ny mpiara-manambady ary dia nofy ratsy ho an'ny mpitantana iray manokana (Pep Guardiola).
Na dia talenta mahavariana aza, Zlatan dia nifanditra tamin'ireo manodidina azy na aiza na aiza nalehany. Mety ho vokatry ny fiavonavonany izany, nefa koa niverina tamin'ny fahaketrahany nandritra ny fahazazany izay nanehoany hatezerana mafimafy izay miteraka adihevitra indraindray.
Zlatan dia efa niady mafy tamin'ny ekipa taloha Rafael van der Vaart izay naratra mafy ny Dutchman nandritra ny lalao iraisam-pirenena.
Ny ady tamin'i Oguchi Onyewu dia nandao an'i Zlatan tamin'ny taolam-paty.
Ibrahimovic, nisy fehitenda mainty tao Taekwondo niaraka taminà tora-pasika hitifitra ny mpiray ekipa aminy, tonga nitsoka niaraka tamin'ny muscular USA international Onyewu taorian'ny sedra dia nanao tetika mampidi-doza. Nandany folo sy mpikamabana ny ekipa esory ny roa amin'ny manipy vato mifampiahy.
Zlatan nanoratra betsaka momba ity tranga ity tao amin'ny autobiography 'Zlatan Ibrahimovic aho'.
"Niaraka tamin'i AC Milan tao amin'ny 2010 aho ary nanakaiky ny fifaninanana lalao fifaninanana. Nandao an'i Inter i Milan, ary ny ankamaroan'ny mpankafy - ny Ultras - dia mankahala ahy. "
"Ankoatra izany dia nanana olana tamin'ny Oguchi Onyewu aho, lehilahy iray ao amin'ny ekipako. Izy no Amerikanina ny habeny trano, ary nilaza tamin'ny vady iray aho hoe: zava-manahirana lehibe no hitranga. Tsapako fotsiny izany. "
Zlatan dia nanome filazalazana tsara momba ny mpilalao sarimihetsika Charlton Athletic teo aloha sy ny fanamarihana taty aoriana, taorian'ny nanazavany ny ady manontolo.
'Onyewu dia nitovy tamin'ny mpanao ady totohondry mahery. Izy dia 6in 5in efa ho 15in ary navesatra ny vaton'i XNUMX, saingy tsy nahavita niady tamiko izy. Nampangainy tamiko ny resaka fako, saingy tsy marina izany. Miteny ahy ny fako. Nandre ny tiana aho nandritra ny taona maro: 'F ****** gypsy', zavatra momba ny mamanay - ireo zavatra rehetra ireo. Mamaly faty amin'ny vatako aho fa tsy amin'ny teny. "
"Niteny tamin'i Onyewu aho fa tsy nanao adihevitra momba ny fako, saingy nitohy hatrany izy. Nasiany rantsan-tànana aho. Avy eo dia nanao izany indray izy. Nahita mena aho. Tsy niteny na inona na inona aho fa tsy teny. Ity b ****** ity dia hahita ny fomba fandroahana-resaka! Ny fotoana manaraka dia azony ny baolina amin'ny fampiofanana; Nihazakazaka nanatona azy aho ary nitsambikina niaraka tamin'ny tongotro sy ny tongony teo anoloany - ny karazana ratsy indrindra. "
"Nahita ahy anefa izy ary nitsambikina teny an-dalana. Rehefa samy nianjera tamin'ny tany izahay dia ny eritreritro voalohany dia: 'S ** t! Very aho! ' Raha nitsangana aho ka lasa nandeha dia nahatsapa ny famelezana ny soroko aho. Tsy hevitra tsara, Oguchi Onyewu. "
"Nokapohiko izy, ary nifampidinika izahay. Te-handrava ny rantsambatana avy amin'ny ratsambatana izahay. Feno herisetra izany. Nandehandeha manodidina izahay, namatotra ary nifanekeny. Adala sy tezitra izahay - tahaka ny fiainana sy ny fahafatesana. "
Rehefa nihena ny zava-drehetra dia nihozongozona ireo mpilalao ary vao haingana i Ibrahimovic no nahita fa nizaka ny taolam-paty izy. Tsy dia ny fotoana voalohany niarahany nifanaovana tamin'ny vady aman-janany izany, saingy angamba io no fotoana voalohany naratra nandritry ny iray.
"Taorian'izany dia nitranga ilay zava-mahagaga indrindra. Nanomboka nivavaka tamin'Andriamanitra i Onyewu tamin'ny ranomaso teo amin'ny masony, nanao ny mariky ny lakroa. Nahatsapa toy ny fihantsiana izany, ary tezitra be aho. Nosakanan'ny mpiara-mianatra tamiko aho, ary heveriko fa zavatra tsara izany. Mety ho nahasosotra izany. Nandritra ny fotoana rehetra, nihevitra aho hoe: 'S ***, ny tratrako dia maratra,' noho izany dia noraisinay izany. Novonoina aho tamin'ny ady. "
'Tsy vao voalohany aho no niady hevitra tamin'ny vady aman-janako.'
Ny adin-dry zareo dia antony iray nahatonga azy nilalao tao amin'ny klioba marobe, ary koa antony iray tsy mpankafy mpankafy sy mpankafy.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Ny niandohan'ny 'The Zlatan'
Ho an'i Zlatan (Fampiasana famaritana sy fampiasana ny sora-baventy)
Raha nilalao ho an'ny ekipany ao an-toerana FBK Balkan fony izy 10 taona, dia navotsotra i Zlatan tamin'ny antsasaky ny antsasaky ny ekipa 5-0. I Ibrahimovic tena tanora dia hamadika ny lalao eo amin'ny lohany, izay mahavariana ny mahavariana eight, marina izany, valo tanjona faharoa tanjona mba handresena ny lalao 8-5.
Fotoana nanaovana izany anarana izany "Ny Zlatan" teraka. Tsy ela dia fantatr'izao tontolo izao ny mpilalao baolina kitra sainam-pirenena tanora manana fahaizana manintona amin'ny fahazazana.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Relationship Life
Zlatan Ibrahimovic Fitiavana (tantaram-piainana)
Tsy nanambady izy tamin'ny fotoana nanoratana azy. Saingy nanana fifandraisana maharitra tamin'ny Helena Segar namany izy. Helena dia modely Soedoà teo aloha. Na dia talohan'ny nifanaovana tamin'i Helena Segar aza dia tsy nanana fitiavana i Zlatan. Manan-janaka roa izy ireo. Miara-monina amin'i Paris miaraka amin'i Helena sy ny zanany amin'izao fotoana izao izy. Helena dia mety ho lasa Zlatan mivady tsy ho ela.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Fitiavana ny Tatoos
Tamin'ny Feb 14, 2015 tamin'ny lalao tamin'ny "SM Caen" tamin'ny fanatsarana ny tanjona dia nanala ny akanjony izy mba hanehoana ny tato amin'ny anaran'ny olona 50 manerana izao tontolo izao, ny fijalian'ny hanoanana. Ity hetsika ity dia manohana ny "Fandaharan'asa momba ny sakafo an-kibon'ny tany.
Zlatan Ibrahimovic Tatoo (Fiambenana Avo ao amin'ny HD)
Tsy mahagaga raha manana tattoos maromaro i Ibrahimovic, saingy misy karazany mahaliana maromaro misy dikany izay manome antsika fanazavana momba ny "The Zlatan". Manana dragona mena lehibe eo anilany izy izay tokony ho fampitahana ho an'ny mpiadiny tahaka ny toetrany, ary mitovitovy aminy koa ny trondro Koi iray eo an-tratra havia izay trondro mivezivezy manidina ary mandeha "manohitra ny varimbazaha".
Izy koa dia manana ny Five Deva Faces Yantra, sary Bodista izay maneho ireo singa izay heverina fa hiady amin'ny aretina.
Zlatan Ibrahimovic Tatoo (Back View amin'ny HD)
Ny laharam-pahaterahana amin'ny ray aman-dreniny sy ny iray tam-po aminy dia mihatra amin'ny tanany, ary izy koa dia manana ny anaran'ny rainy sy ny reniny eo amin'ny tanany havanana sy ny reniny eo ankaviany.
Zatovo Ibrahimovic Tatoo Names
Tatoazy vitsivitsy hafa ihany koa ny teny hoe "Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy" (hira Tupac) ao amin'ny ribcage, ary ny atin'ny fo sy ny klioba ao amin'ny kibay ankavanana izay tokony hisoloana vintana tsara.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-The Master Snubbing
Hafaliana mahavariana an'i Ibrahimovic tamin'ny namany namany: 'Tsara kokoa noho i Zlatan zalahatro tsara aho ... ankehitriny dia kintana izy ary nandroba ahy nandritra ny taona 13.
Tsy nanaiky foana ry zareo, indrindra mikasika ny baolina kitra. 'Nandevilevy ny Shearer aho ary nankahalany baolina amin'ny baolina anglisy tamin'ny teny anglisy satria tiako be izany - izany no izy,' hoy Flygare. 'Nolazainy foana fa handeha hilalao any Italia izy.'
Rehefa nantsoin'ny renin'i Flygare teny an-dalambe izy ireo dia nipetraka teo am-pandriana nandritra ny ora maro, niady tamin'ny fanaraha-maso ny lalao fampiasa.
'Tahaka ny kambana,' hoy i Flygare avy amin'ny fifandraisan'izy ireo. 'Zatovo teo amin'ny lafiny maro aho, ary nijery ahy izy, fa tena nifaninana.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Matoky tena
Eo am-pikatrohana, Zlatan dia matoky tanteraka sy mino ny tena, ary betsaka loatra ka matetika izy dia miankina amin'ny tenany amin'ny olona fahatelo ho "Zlatan", na mampiasa ny anarany ho toy ny matoanteny "Zlatan" miaraka amin'ny fahaiza-mana-talenta na ny talenta na ny manapaka. Ny pejin-tsasany sy ny dinidinika ao amin'ny Twitter dia zavatra iray hijerena sy hisarihana ny sain'ny maro toy ny antikony eo an-kianja, satria izy dia manakaiky ny filôzôfia indraindray amin'ny sasany amin'ireo teniny.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Net Worth
Zlatan Ibrahimović dia manana ny lanjany $ 160 tapitrisa. Ho an'ny ekipa nasionalin'i Soeda, nandroso i Ibrahimović $ 35 tapitrisa isan-taona amin'ny karama. Fifindran-dàlana ho an'ny Premier League miaraka amin'i Manchester United ho an'ny fizarana 2016-17. Taorian'ny fifampiraharahana naharitra ela niarahana tamin'i Nike, dia niverina tamin'ny fifanarahana iray tapitrisa $ 3 tapitrisa isan-taona tamin'ny 2019 izy.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-olana ara-pitsarana
Nihemotra indray tamin'ny lalàna izy rehefa nahazo karatra mena izy mba hamelezana an'i Salcatore Aroniaca tamin'ny fanonganam-panjakana goavambe nanohitra an'i "Napoli." Nohanina nandritry ny lalao telo nataon'ny mpitsara Sports Gianpaolo Tosel izy.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Lohatenin'ny Winner & Club Honor
Araka ny voalazan'i Zlatan, "Mieritreritra foana aho fa te hampifaly ny hafa", hoy ny fanazavany. "Na aiza na aiza alehako dia efa nandresy aho (lisitry ny ligy sivy tamin'ny vanim-potoana 10 izay misy fikambanana dimy). Saingy afa-po ihany aho raha toa ka faly ny mpiray tam-po amiko, ny mpankafy, ny rehetra. Manana fo lehibe aho. "
Zlatan dia nanaporofo fa tena mahafaty izy na inona na inona karazana akanjo ataony amin'ny fanatsarana ny fifaninanana klioba lehibe indrindra ao Eoropa miaraka amin'ireo klioba enina samihafa. Izy dia mpilalao baolina kendreny izay afaka milalao tsara eo anatrehan'ny mpitantana samihafa.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Fanajana ny Legioma Breziliana
Tsy sôdôgy ny mahery fo, na dia nahavita fahatelo aza izy ireo tao amin'ny World Cup 1994. Manana maso fotsiny ny fahitana an'i Brésil izy, nianatra ny fitiavan'i Ronaldo Nazario de lima sy Ronaldinho. Nijery tamim-pahazotoana izy ary nanamboatra horonantsarin-tsary momba ny fomba nanatanterahany ny alahelony.
Araka ny voalazan'i Zlatan, "Tsy mahita an'i Soeda intsony aho, tsy nanao izany mihitsy aho," hoy izy. "Tiako i Brezila satria zavatra hafa izy ireo. Izy ireo dia nikasika ny baolina tamin'ny fomba hafa, toy ny kianja hockey izay ahitanao ny baolina. Izany dia mahagaga ary samy hafa tanteraka tamin'ny zavatra hitako taloha. "
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Lahateny miaraka amin'i Guadiola
Mafana amin'ny afo? Tsy natahotra ny hiresaka ny heviny i Ibrahimovic ary nitsikera an'i Guardiola. Raha ny marina, niampanga ny lehiben'ny fitondran'i Pep Guardiola ho toy ny "kanosa" tsy misy "baolina" i Zlatan.
Nifindra tany Barcelone ny nofinofiny ary niafara tamin'ny fisavorovoroana ny fifandraisany tamin'i Guardiola. Araka ny nambarany, "Manana nofinofiko hanatevenana an'i Barcelona aho amin'izao fotoana izao fa mieritreritra angamba ianao fa tokony ho tadidinao ny nofinao raha tokony ho nataon'izy ireo ho tanteraka, satria mety ho nandratra ahy izany."
Nandritra ny volana vitsivitsy voalohany tany Espaina dia nandeha tsara ny fiainana, saingy tsy nijanona intsony i Guardiola. "Mbola tsy fantatro ny antony, tsy mety mihitsy aho", Hoy Ibrahimovic.
"Niezaka nifandray taminy aho - saingy tsy te hiresaka tamiko izy, dia nisoroka ahy izy. Niditra tao amin'ny efitra iray aho, nipetraka teo izy nisotro ny kafe. Saingy nitsangana izy, tsy nahavita ny kafe. Nieritreritra aho hoe: 'Tsy olana aho, izy no olana.' Saingy tsy misy teny, tsy misy valiny, na inona na inona.
Nalahelo i Ibrahimovic taorian'ilay lalao niaraka tamin'i Villarreal. "Nikiakiaka tao Guardiola aho, nikiakiaka aho fa tsy nanana baolina izy ary tsy nisy nieritreritra hoe tsy niresaka tamin'ny mpilalao azy izy. Nesoriko teo anoloany ny boaty iray ary nandefa zavatra teny amin'ny tany aho.
"Tezitra aho ka te hiresaka tamiko. Nefa na inona na inona. Naka ny boaty izy, namerina azy ary nivoaka avy tao amin'ny efitrano. "
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Ny Zlatan Dictionary Verb Registration
Rehefa avy nijery dinidinika vitsivitsy tamin'ny mpikatroka Soedoà ianao dia hahita zavatra iray haingana; Tiany ny feon'ny anarany.
Raha ny marina, raha ny marina dia nanana ny mari-pamantarana tao 2003 izy. Miaraka amin'ny "Zlatan" sy "Zlatan Ibrahimovic" marika, dia midika izany fa manana zo manokana izy amin'ny anarana entina toy ny akanjo, kiraro ary fanatanjahan-tena.
Ao Frantsa, ny teny 'Zlataner' ankehitriny ny fomba amam-panao "Hanorotoro". Tamin'ny volana Desambra, ny Filankevitry ny teny Soedoà dia nanoratra ny matoanteny 'to zlatan', midika manao zavatra mahatsiravina na manafintohina. Zlatan Ibrahimovic dia mpankafy mpilalao baolina iray, teny, fomba fitondràna, fomba fiainana.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Hatezerana
Mbola milalao an-katezerana foana izy amin'ny alàlan'ny lalan-drà, fa ankehitriny dia alefa izy. "Nifehy ahy ny fahatezerana voalohany. Ankehitriny dia mifehy azy aho, " hoy izy.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Swedish Honors
Ny testamenta momba ny fandrosoana an'i Ibrahimovic, dia nandresy sahady ny Guldbollen (Footballer of the Year of the Year) tamin'ny sivy. Naka ny 9 izyth nomena tamin'ny volana novambra ny 2014, izay ny 8thloka manaraka miaraka amin'i Freddie Ljunberg nandresy tamin'ny 2006 taorian'ny loka voalohany nomen'i Zlatan tao 2005. Taorian'ny fanangonana ny loka farany, nilaza i Ibrahimovic fa mbola "miaina ny nofinofiko" ary te-hahazo "be lavitra kokoa" izy. Nomeny ihany koa i Graess Ingesson sy Pontus Segerstrom ary ny rahalahiny, izay rehetra nodimandry vao haingana.
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Mpampianatra Taekwondo
Ny maha-mpitendry sy mpilalao azy dia i Ibrahimovic dia mahita ny heviny vitsivitsy ary miady amin'ny mpanohitra sy ny ekipan'ny ekipa.
Izy dia mpilalao iray izay tsy te-hiditra amin'ny toerana tsy mety, satria nanjary fehikibo mainty tao Taekwondo fony izy 17 taona tao amin'ny tanànan'i Malmo. Nahazo volombava mainty avy amin'ny ekipa italiana Taekwondo ihany koa izy. Ny fahaiza-manaony ara-batana ihany koa dia manampy azy amin'ny sehatra, satria izy dia manana fahaizana amam-panafahana ho an'ny akrobatika sy ambonimbony an-tampony na dia eo aza ny habeny, izay efa nahatsikaritra an'izao tontolo izao imbetsaka (miaraka amin'i Angletera amin'ny fiafaran'ny tanjona miavaka iray).
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita-Famaritana tsara indrindra momba ny biôgrafia
Ny kintan'ny baolina dia namoaka ny autobiography, Izaho no Zlatan Ibrahimovic, tamin'ny faran'ny 2011. Ny tsangam-pandrefesana fohy momba ny fahazazan'i Ibrahimovic sy ny fifandonany tamin'i Guardiola sy ireo mpilalao hafa, ary ny dikanteny anglisy dia nivoaka tamin'ny Septambra 2013.
Aogositra 3, 2018
Enga anie 1, 2017